उपेन्द्र यादव मधेशमा जातीय विषको विजारोपण गर्दैछन् : महतो
वर्तमान सरकारको व्यवहारअनुसार लोसपाले सरकारको विरोध र आलोचना गर्ने महतोको भनाइ छ ।
२०७८ भदौ १९ शनिबार
बेलुकी ६:५९ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादवले मधेसभन्दा पनि जातीयवादी विषपूर्ण राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले अहिले केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आउने दिनमा मधेसलाई गम्भीर क्षति हुने चेतावनी दिए ।
जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महतोले आफूलाई मधेसमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि अग्रसर भइरहेको अवस्थामा उपेन्द्रसँग पार्टी एकता गरे पनि उनले धोका दिएको आरोप लगाए ।
उनले भने,’हामी मधेसी एकतावाद जिन्दावादको नारा लगाउँदै थियो, उपेन्द्रसँग एकता गरियो । तर उनले एकतालाई गलत रुपमा बुझे । जसकारणले एकता टिकेन ।’
महतोले मधेसको जनतालाई अब मुर्ख बनाउन नसकिने भन्दै सारा परिस्थितिको विषयमा जनता जानकार रहेको कारणले आउने दिनमा सबै परिस्थितिलाई लिएर जनताको बिचमा जाने बताए ।
उनले केही व्यक्तिलाई लोभ दिएर आफूतर्फ ताने पनि केही दिनमा उनीहरुको भ्रम निवारण भएर पछुतो मात्रै गरिने ठाउँ रहेको बताए ।
तपाईहरुको धेरै कार्यकर्ताहरु उपेन्द्र यादवतिर गएको प्रश्नमा महतो आफूहरु पार्टी बनाउन खोजेको कारणले उनीहरुको स्वार्थलाई पूर्ति गर्न नसक्दा उता गए पनि आउने दिनमा उपेन्द्रको साथ छाड्ने दाबी गरे ।
महतोले उपेन्द्र यादव अहिले पनि कम्युनिस्ट मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको बताउँदै उपेन्द्र पक्षले देखावटी रुपमा मधेसको कुरा गरेपनि वास्तविकरुपमा मधेस पक्षधर नरहेको अरोप लगाए ।
सिरहाः हिरासतबाट थुनुवा भागेपछि सई सहित तीन प्रहरी निलम्बन
न्यूज ब्यूरो, सिरहा । सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट फलामको ग्रील काटेर थुनुवा फरार भएको प्रकरणमा तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले छानबिन समिति गठन गरी
न्यूज ब्यूरो, सिरहा । सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट फलामको ग्रील काटेर थुनुवा फरार भएको प्रकरणमा तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले छानबिन समिति गठन गरी हिरासतबाट थुनुवा फरार भएको विषयमा छानबिन गर्दै तत्काल तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी सहायक नीरिक्षक (सई), एक प्रहरी हबल्दार एक प्रहरी जवानलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता एवम् डिएसपी सुवास बुढाथोकीले जनाएका छन् ।
गत जेठ २० गते लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ बस्ने पशुपति यादव थुनुवा कक्षको झ्यालको ग्रील काटेर फरार भएपछि उनको सुरक्षामा बसेका तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरेको हो ।
सो घटनाको छानबिनको लागि डिएसपी बुढाथोकीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको डिएसपी बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार, फरार भएका यादव अझै पक्राउ परेका छैनन् भने तीन जना प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी प्रमुख डा. तपन दाहाललाई उन्मुक्ति दिएर तीन प्रहरीलाई नै निलम्बन गरेपछि छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।
स्थानीय निकायको चुनाव बिना कुनै पार्टीको हुनुपर्छः यादव
यसपाली गोली चलोस् या तोप हामी रोकिने छैनौः डा. सिके राउत
अब मेयर, साँसद र मन्त्रीलाई पनि यस्तै जन–कारवाही हुन्छ: डा. सिके राउत